Bad Boys I (1995) | MM Movie Store
လူတိုငျးရငျးနှီးပွီးသား မငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Will Smith နဲ့ Martin Lawrence တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့Action , Comedy , Crime ဇာတျကားပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ မငျးသားနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Will Smith နဲ့ Martin Lawrence တို့က မိုကျချနဲ့ မားကပျဈဆိုတဲ့ မိုငျယာမီမူးယဈတိုကျဖကျြရေးမှုခငျးရဲတှပေါ။
တဈနေ့ သူတို့ ဌာနမှ ထိနျးသိမျးထားတဲ့ ကိုကငျးတှကေို အဖောကျခံလိုကျရပါတယျ။ အဲ့လိုအဖောကျခံလိုကျရတော့သူတို့ရဲ့ခေါငျးဆောငျ ဟောငျးဝဒျက သူတို့ကို ကို ပွနျရှာခိုငျးပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ မိုကျချနဲ့ မားကပျဈက သူတို့နဲ့အရငျကဇာတျလမျးတှရှေိခဲ့ဖူးတဲ့ ဆေးသမား ပွညျ့တနျဆာတှနေဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ သတငျးယူပွီး ဒီအမှုကိုလိုကျတာကနတေဈကားလုံး သဘောကစြရာကောငျးလောကျအောငျကို သရုပျဆောငျပွသှားတာပါ။
ကျောဖီကွိုကျတတျတဲ့သူတှကေဒီ မူဗီကိုမဖှငျ့ခငျကတညျးက ဖြျောထားနှငျ့ကွပါ . . . မူဗီကွညျ့နရေငျး ထဖြျောဖို့ကို ဝနျလေးနမှောလို့ ကွိုပွောထားပါရစေ။
လူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသား မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Will Smith နဲ့ Martin Lawrence တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Action , Comedy , Crime ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Will Smith နဲ့ Martin Lawrence တို့က မိုက်ခ်နဲ့ မားကပ်စ်ဆိုတဲ့ မိုင်ယာမီမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှုခင်းရဲတွေပါ။
တစ်နေ့ သူတို့ ဌာနမှ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကိုကင်းတွေကို အဖောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့လိုအဖောက်ခံလိုက်ရတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ဟောင်းဝဒ်က သူတို့ကို ကို ပြန်ရှာခိုင်းပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မိုက်ခ်နဲ့ မားကပ်စ်က သူတို့နဲ့အရင်ကဇာတ်လမ်းတွေရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဆေးသမား ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ သတင်းယူပြီး ဒီအမှုကိုလိုက်တာကနေတစ်ကားလုံး သဘောကျစရာကောင်းလောက်အောင်ကို သရုပ်ဆောင်ပြသွားတာပါ။
ကော်ဖီကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေကဒီ မူဗီကိုမဖွင့်ခင်ကတည်းက ဖျော်ထားနှင့်ကြပါ . . . မူဗီကြည့်နေရင်း ထဖျော်ဖို့ကို ဝန်လေးနေမှာလို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။
See (Season 1) အပိုငျး (၂)